कोरोनाको माहामारीको बेला चितवन बाट। आयो अत्यन्तै दुखद घ’ट्नाको खबर. – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कोरोनाको माहामारीको बेला चितवन बाट। आयो अत्यन्तै दुखद घ’ट्नाको खबर.
चितवन – जङ्गली च्याउ खादाँ चितवनमा १२ जना बिरामी भएकाछन् । जङ्गली च्याउ खाँदा बिरामी भएका दुई परिवारका १२ जनाकाे चितवनमा उपचार भइरहेको छ । बिरामीमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनाका डीएसपी एकनारायण कोइरालाले बताउनुभयाे ।
जङ्गली च्याउ खाँदा चितवनको कालिका नगरपालिका ३ काे पदमपुरका सात जना बिरामी भएका हुन् । उनीहरुले घर नजिकैको जङ्गली च्याउ खाएका थिए । जङ्गली च्याउँ खाँदा पदमपुरका ३४ वर्षीय शिव चौधरी, २७ वर्षीया समीक्षा चौधरी, २४ वर्षीया अनिता चौधरी, २५ वर्षीय निरजकुमारी चौधरी, ४० वर्षीया सीतावती देवी, ४५ वर्षीय लखन चौधरी र २७ वर्षीया पूजा चाैधरी बिरामी भएका हुन् । उनीहरुको अहिले भरतपुर सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बिरामीमध्ये २४ वर्षीया अनिता चौधरीको अस्था गम्भीर रहेको भरतपुर सामुदायिक अस्पतालका डाक्टर महेन्द्र अग्रहरीले जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै जङ्गली च्याउ खाँदा भरतपुर महानगरपालिका २९ काे जुगेडीका पाँच जना बिरामी भएका छन् । उनीहरुले शनिबार साँझ घर नजिकै रहेको वनबाट टिपेर ल्याएको जङ्गली च्याउ खाएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बिरामी हुनेमा ५५ वर्षीय वीरबहादुर चेपाङ, उहाँका २५ वर्षीय छोरा सुमन चेपाङ, २२ वर्षीया बुहारी सिर्जना चेपाङ, छाेरीहरु १९ वर्षीया शर्मिला चोपाङ र १५ वर्षीया अञ्जना चेपाङ रहेका छन् ।
च्याउ खाएसँगै बिरामी परेपछि उनीहरुलाई भरतपुर अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएको थियो । बिरामीमध्ये वीरबहादुरको अवस्था गम्भीर रहेको र अन्यको सामान्य रहेको प्रहरीले बताएको छ । अन्तिम अपडेट: बैशाख २२, २०७७
मनिषा कोइराला : जसले भारतबाट लिने होइन भारतलाई नै दिइरहदा, उल्टो उनी माथि नै खनिए भारतीय मिडिया !